IBhodi yePhepha le-Insole lase China lokuSebenza kunye neFektri | Ifayile yeWode
Ibhodi yePhepha le-Insole ye-Insole
Ubukhulu: Ngokwesiqhelo i-1.00mx 1.50m okanye ngokwesicelo somthengi
Umgangatho: 555,001,517,608, umgangatho ophezulu wokukhetha
Ubunzima: Kuxhomekeke kumgangatho kunye nobukhulu, pls uqhagamshelane nathi iinkcukacha
Igama lebrand: Imoontex, iEurotex
Ukupakisha: Amaphepha angama-25 kwingxowa nganye
Isakhono esifanelekileyo, ukunamathela okufanelekileyo, isibonelelo sokwenza iisutikheyisi kunye nezihlangu.
Isetyenziswe ngokusesikweni kwiZiko lokuGcina: iifaki zokubamba ifayile, ibhegi yesikolo kunye nencwadana yokubhalela
Ngephepha okanye ngokuqengqelekela iphepha le-texon, amaphepha angama-25 kwibhola enye, okanye ngeepelethi zomthi ezipakishwe.
Ukubonelela ngokuthe ngqo ngexabiso lokuqala lefektri kunye nesiqinisekiso somgangatho esifanelekileyo kubathengi
Sigqibe inkqubo yokulandela umkhondo wentengiso emva kokufumana ingxelo evela kusetyenziso lwabathengi.
Amaqela okuthengisa anamava i-12hours emgceni wokuphendula nawuphi na umbuzo ngesiNgesi.
Ulwazi malunga nathi
1.We ngokungqongqo ukulawula umgangatho kwinkqubo nganye yokusebenza ngokwe-ISO 9001 inkqubo yolawulo. Iimveliso zethu zifumene izatifikethi ze-SGS, UNION, INTERTEK.
Inkampani 2.Our ikakhulu ukuvelisa ibhodi insole, sheet imichiza (uzwane ukukhukhumala kunye counter), pingpong (sinyibilike eshushu) kunye nezinye iimveliso series non-ephothiweyo.
Iimarike zezinto eziphambili ze-3 zi-Europe, Middle East, South America, Southeast Asia kunye neminye imimandla.
Ndingazi njani ulwazi oluthe kratya kwiimveliso zakho?
A: Zininzi iindlela: gcina inkxalabo kwiwebhusayithi yethu, sikwanokuthumela incwadana yemveliso yesiNgesi kuwe. Kwaye ngaphezulu siya kuthatha inxaxheba kwiCanton Fair okanye kolunye ulwalamano lwangaphandle. Ungandwendwela nendawo yethu. Enkosi. Ukufumana eminye imibuzo pls ushiye umyalezo kwiWebhusayithi yethu okanye unxibelelane nathi ngqo!
2.Q: Ungayibeka njani iodolo nawe?
I-A5: Enye indlela kukuba ungasithumelela iinkcukacha zakho zoku-odola nge-imeyile okanye ngefeksi, emva koko sinokwenza i-invoice yakho ye-proforma, emva koko uhlawule idiphozithi kuthi, emva koko sikulungiselele iimveliso. Enye indlela kukuba ungabeka i-odolo kwi-intanethi ngokuthe ngqo, enokunika isiqinisekiso se-inshurensi yakho, kukukhuseleka ngakumbi, njengoko kukho umntu wesithathu onika isiqinisekiso sakho sokuqinisekisa ukuba ungazifumana iimveliso zesicelo sakho.
3.Can sineLogo yethu okanye igama lenkampani ukuba liprintwe kwiimveliso zakho okanye kwiphakheji?
A: Ngokuqinisekileyo.I logo yakho inokufakwa kwiimveliso zakho ngokushushu isitampu, ukuprinta, ukubhala i-embossing, ukutyabeka i-UV, ukuprinta kwesilika okanye isitikha.
Egqithileyo Ibhodi ye-insole yephepha
Okulandelayo: I-TPU ishushu ifilimu yokuncamathelisa
I-1.25mm i-Winnertax ye-Cellulose yezihlangu zePhepha leBhodi ye-Insole Board
1.75mm Ibhodi ye-Insole Board yezihlangu
I-2.0mm yePhepha le-Insole Board yezihlangu
Iphepha leBhodi ye-Insole
Ibhodi yePhepha le-Insole
I-Insole Paper Board yezihlangu
Ibhodi yephepha lebhokisi
Ibhodi yePhepha Insole
Iphepha lebhokisi yebhodi yebhodi yebhokisi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhodi yebhodi
Ibhodi ye-Insole Board ene-Eva
Iphepha eliPinki lePhepha leBhokisi yeeNdawo zeNdawo yezihlangu
Iphepha lePhepha lePhepha leZihlangu
Ibhodi ye-Shoe Insole Material Insole Board
IBhodi yePhepha lePhepha leTexon
Ibhodi yePhepha le-Wodetex Insole yePhepha lokwenza izihlangu
Ibhodi ye-insole yephepha
Iphepha lezinto ze-Shoe Insole, Ilaphu elingenagwele kunye noEva, Ibhodi ye-Insole Board ene-Eva, Ilaphu nonwoven elaminethiweyo kunye Eva Foam, Inaliti Punch Nonwoven Ilaphu, Ibhodi ye-Insole noEva,